Pangaia – 𝐀𝐫𝐢𝐞𝐥'𝐬 𝐒𝐭𝐲𝐥𝐞
ယနေ့ခေတ်တွင် (sustainable living) ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော နေထိုင်မှုစနစ်ကို စိတ်၀င်စားမှုမြင့်မားလာတာကြောင့် PANGAIA ဆိုတဲ့ sustainable brand လေး တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
Greece နိုင်ငံအခြေစိုက် Pangaia brand ဟာဆိုရင် Material Science Limited အဖြစ်စတင်ခဲ့ပြီး နာမည်ကြီး brand တော်တော်များများအတွက် Material supplier အနေနဲ့ ပထမဦးဆုံးလုပ်ကိုင်ခဲ့ကာ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ မှစတင်၍ ကိုယ်ပိုင် Brand တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ Fasion Business ထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
Eco-friendly Brand ဟုသတ်မှတ်နိုင်ပြီး သိပ္ပံပညာရှင်များ၊ နည်းပညာရှင်များ၊ အနုပညာရှင်များနှင့် ဒီဇိုင်းပညာရှင်များတို့ကို ပေါင်းစည်း၍ ဇီ၀ဓာတုဓာတ်ခွဲခန်းမှ ထုတ်ဖော်တွေ့ရှိသော အစားထိုးအရင်းအမြစ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော sustainable ၀တ်စုံများဖြင့် ဖက်ရှင်လောကသို့ ထိုးဖောက်၀င်ရောက်ခဲ့တဲ့ Pangaia Brand ကတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများကို လျှော့ချနိုင်ခြင်းကြောင့် အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲ Generation Z အတွက် အသင့်လျော်ဆုံးနှင့် နာမည်အကြီးဆုံး Nature-friendly brand တစ်ခုလည်း ဖြစ်လာပါတယ်။
Sustainability (ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု) ဆိုသောအသုံးအနှုန်းသည် ယနေ့ခေတ် Fashion လောက၏ Hot topic တစ်ခုပင် ဖြစ် သည်။ Ellen Macarthur Foundation ၏ အဆိုအရ အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းသည် ၂၀၅၀ ခုနှစ်တွင် သမုဒ္ဒရာရှိ မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာ တန်ချိန် ၂၂ သန်း အထိတိုးပွားစေနိုင်ပြီး ကာဗွန်တန်ချိန်ကိုလည်း ၂ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၆ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးပွားလာစေနိုင်သည်။
ကမ္ဘာ့အ၀တ်အထည်ထုတ်လုပ်မှုသည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၁၅ အတွင်း နှစ်ဆ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ သို့သော်အသုံးပြုမှုနှုန်းမှာ သိသိသာသာကျဆင်းသွားသဖြင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တစ်နှစ်အတွင်း ဖက်ရှင်ထုတ်လုပ်မှု၏ ထက်၀က်သည် စွန့်ပစ်ခံရသည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ ခေတ်မမှီသောဖက်ရှင်များစွန့်ပစ်မှုသည် သဘာ၀အရင်းအမြစ်များအပေါ် ကြီးမားသော ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေ သောကြောင့် circular fashion စနစ်ကို စတင်အသုံးပြုလာ ကြသည်။
Stella McCartney, Prada, Chanel , Gucci , Nike, H&M အစရှိသော ထိပ်သီးဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်များသည် အ၀တ်အထည် ဒီဇိုင်း ထုတ်လုပ် ရောင်းချမှုနှင့်ပြန်လည် အသုံးချပုံ နည်းလမ်းများပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်သဘာ၀ ပတ်၀န်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းနေကြသည်။ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းပညာနှင့် သိပ္ပံနည်းပညာသစ်များပေါင်းစပ်၍ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများပြုလုပ်လာကြပြီး sustainable fashion သို့ ဉီးတည်လာကြသည်။
PANGAIA FLWRDWN ™ Puffer ဂျာကင်အင်္ကျီသည် နွေးထွေးသော၊ အသက်ရှူနိုင်သော၊ (hypoallergenic) အသားအရေကိုအလာဂျစ်ဖြစ်စေမှုကိုလျော့နည်းစေသော ပန်းနှင့်လုပ်သော sustainable ဝတ်စုံဖြစ်သည်။ Flwrdwn puffer collection သည် မတူညီ သော စတိုင်သုံးမျိုး နှင့်ထုတ်လုပ်ထားပြီး ဈေးနှုန်းများကအမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅၅၀ မှစတင်၍၇၅၀ အထိဖြစ်သည်။
PANGAIA FLWRDWN ™ Puffer ဂျာကင်အင်္ကျီများသည် သဘာဝခြောက်သွေ့သော တောရိုင်းပန်းများ နှင့် ဇီ၀ပိုလီမာဖြင့် ဖန်တီးထားသည်။ ထို့ကြောင့်ပန်းများသည် သင့်ကိုနွေးထွေးစေပြီးတိရိစ္ဆာန်များက သူတို့၏အမွေးများကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ အပြည့်အဝဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်သည့် ပစ္စည်းဖြစ်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကြာရှည်ခံမှုတို့အတွက် aerogel ကိုဂရုတစိုက်ထည့် သွင်းထားသည်။ ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော polyester shell နှင့်ပေါင်းပြီးအေးမြသော ရာသီဥတုတွင်နွေးထွေးရန်အမှန်တကယ်ဆန်းသစ်သော နည်းလမ်း ဖြစ်သည်။
1. Seaweed Fiber
ပင်လယ်ရေမှော်မျှင်များ ဖြင့် ဖန်တီးထားသော ဖိုင်ဘာ သည် ပေါ့ပါးပြီး ဝါဂွမ်းထက်အစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူပြီး ရေညှိမှ အာဟာရအချို့ကို ထိန်းသိမ်းထားသဖြင့် နူးညံ့သော ခံစားမှုကိုပေးသည့်အပြင် အသားအရေအတွက်ကောင်းသော အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ အ၀တ်အထည်၏သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားသောအခါ ဇီဝယိုယွင်းပျက်စီး သွားပြီးဇီ၀ဗေဒဆိုင်ရာအာဟာရများအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသည်။ PANGAIA တီရှပ် များတွင် 20% ပင်လယ် ရေမှော်မျှင်များပါဝင်သည်။
ပုံမှန်ဝါဂွမ်းသည် ရေပိုလိုအပ်ပြီးပိုး သတ်ဆေးများနှင့် မြေဆီလွှာအားအချိန်နှင့်အမျှ ပျက်စီးစေသည်။ အော်ဂဲနစ်ဝါဂွမ်းထုတ်ကုန်များသည် အသားအရေနှင့်မြေကြီးအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။အော်ဂဲနစ်ဝါဂွမ်းအင်္ကျီတီရှပ်များသည် ၁၀၀% အော်ဂဲနစ်ဝါဂွမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ဓာတုဗေဒကင်းသောအထည်ဖြစ်သည်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း 100 ဘီလီယံကျော် အဝတ်အထည်များ နှင့် 500BNကျော် ပလပ်စတစ်ပုလင်းများကို ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပြီး တစ်ဝက်သည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အဖြစ်အမှိုက်ပုံသို့ ရောက်သွားသည်။ ၂၀၅၀ ခုနှစ်တွင် သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်း များ သည် သက်ရှိရေ သတ္တဝါများထက်ပင်ပိုမိုများ ပြားလာနိုင်ပြီး ပတ်၀န်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကို ပိုမိုဆိုးရွားလာနိုင်ကြောင်း ပညာရှင်များကဆိုသည်။ PANGAIA ကအထည်အလိပ်နှင့် ပလပ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း များကို အသုံးပြု ပြီး ချည်ထည်များအဖြစ်လည်း ပြောင်းလဲ ထုတ်လုပ် သည်။
4. Botanical Dyes
PANGAIA မှရွေးချယ်ထားသည့် ဆိုးဆေးများသည် သဘာဝမှဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အရောင်တစ်ခုချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင်နောက်ခံသမိုင်းရှိသည်။ အသုံးပြုသော သဘာဝဆိုးဆေးများကို အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ သဘာဝအရင်းအမြစ်များမှဖန်တီးထားသည်။ အရောင်များကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဆိုးဆေးများနှင့်ပြန်လည်သန့်စင်သောရေစနစ် အသုံးပြု၍ ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ အထည်အလိပ်ကို ရေနည်းသောနည်းဖြင့် ဆေးဆိုး ပြီး အဆိပ်မရှိေသာ အပင်များ ၊ သစ်သီးများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များမှလှပ သောအရောင်များ ကို ဖန်တီးထားသည်။အဆိပ်အတောက်ကင်းစေပြီးသဘာ၀ပတ်၀န်း ကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော ဆိုးဆေးဖြစ်သည့်အပြင် ကမ္ဘာဂြိုဟ်အပေါ်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသော သက်ရောက်မှုများကို လျော့နည်းစေသည်။ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ကင်းဝေးကြောင်း Oeko-Tex® ၏ အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံရသော sustainable brand တစ်ခုဖြစ်သည်။
Peppermint oil treatment နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုထားသဖြင့် antibacterial effect ကိုရစေပြီး မကြာခဏဆေးကြောရန်မလိုအပ်ဘဲ ရေ၊စွမ်းအင်နှင့်အချိန်တို့ကိုသက်သာစေသည်။
PANGAIA ထုတ်ကုန်တိုင်းကို TIPA ထုတ်ပိုးကုန်အိတ်ဖြင့် အသုံးပြု၍ ထုတ်ပိုးထားပြီး အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ပုံနှိပ်စာလုံးအားလုံးကို ရေအခြေခံ PVC မှင်ဖြင့် အသုံးပြုထားသည်။ ဇီ၀အခြေပြုပလတ်စတစ်အစားထိုးပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၂၄ပတ် အတွင်းမြေဆီလွှာအတွင်းရှိ ဇီ၀ဗေဒဆိုင်ရာအာဟာရများအဖြစ်ပြောင်းလဲ၍ ဆွေးမြေ့ပြောက်ကွယ်သွားသည့်အတွက် ပလပ်စတစ်စွန့်ပစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဆိုးကျိုးများကို ကာကွယ်နိုင်ပေသည်။
6. The Pastel Collection
Haroshi သည် upcycled skateboards များကိုပန်းပုရ့ပ်များထုလုပ်သော အနုပညာရှင်တစ်ဉီးဖြစ်သည်။ PANGAIA နှင့်ဂျပန်အနုပညာရှင်Haroshi နှင့် ပူးပေါင်း၍ ထူးခြားသော အနုပညာလက်ရာလေးခုပါ၀င်သည့်Limited capsule collectionကိုPANGAIA Seaweed fiber-t shirt တွင်ဖန်တီး ပုံနှိပ်ခဲ့သည်။
Just Water နှင့် ကမ္ဘာ့သမုဒ္ဒရာနေ့ (2020 , ဇွန် ၈ ရက်) ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဖက်စပ်ထုတ်သော PANGAIAXJUST collection ဖြစ်သည်။(Organic Cotton T-shirt, Crop T-shirt, Long Sleeve Crop T-shirt), Sweatshirt, Short Shorts နှင့် Long Shorts များပါ၀င်သည်။
An image of the Starnberg Lake in Germany
Just Water Co-Founder Jaden Smith
Takashi Murakami သည်ရိုးရာဂျပန်ပန်းချီ၊ သိပ္ပံဝတ္ထု၊ animation နှင့် global art marketကမ္ဘာ့အနုပညာစေျးကွက်မှဆွဲယူသောပန်းချီကားများ၊ ပန်းပုများနှင ့်ရုပ်ရှင်များကိုဖန်တီးသည်။ PANGAIA x Takashi Murakami Collection တွင်တီရှပ်နှစ်ခုနှင့်သီးသန့် ဒီဇိုင်း ရေးဆွဲ ထားသော အနုပညာလက်ရာများနှင့် Hoodies နှစ်ခုပါ၀င်သည်။
PANGAIA တံဆိပ်ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် Core Collection မှဂန္ထဝင်တီရှပ်များ၊ Hoodies & Track Pants များကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Sweatshirt, Short Shorts နှင့် Long Shorts များကို ၂၀၂၀ August တွင် update လုပ်ထားပါသည်။ ကိုဘော့အပြာ၊ ရွှေဝါရောင်၊ Flamingo ပန်းရောင်၊ Persimmon လိမ္မော်၊ ကောင်းကင်ပြာပြာ၊ သစ်ခွနှင့် Jade အစိမ်းရောင် တို့ပါ၀င်သည်။
2020 စက်တင်ဘာလမှာ ဒီ CORAL REEF COLLECTION လေးကတော့နောက်ဆုံး collection ဖြစ်တဲ့ ကန္တာရ DESERT COLLECTION လေးနဲ့ အတူအသစ် တစ် ဖန်ပြန်လည် ရောက်ရှိလာပြန်လာပြီ။ CORAL REEF COLLECTIONS ကတော့ သန္တာကျောက်တန်းများ၌ တွေ့ရသော သဘာ၀အရောင်များဖြစ်သော Seagrass Green, Red Sea, Starfish Yellow, Sea Blue, Marine Green, Purple Coral အရောင်များ ပါဝင်ပြီး DESERT COLLECTION မှာတော့သဲကန္တာရ ၃ခုမှသဲ၏အရိပ်ကို inspire ယူ၍ ထုတ်လုပ် ထားပါသည်။
7 Color Pop up
PANGAIA သည် T-shirts, Tnank Tops, Hoodies, TrackPants, Sweatshirts, Shorts, Jackets စသောနေ့စဉ်၀တ်၀တ်စုံ များကို Fast fashion အဖြစ်collectionများ ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Jaden Smith , Bella Hadid ,Justin Bieber , Hailey Biber , Kourtney Kardishan အစရှိသော celebrity များနှစ် သက်၀တ်စားသော sustainable fashion brand တစ်ခု လည်းဖြစ်သည်။ Hollywood လူငယ်များရွေးချယ်သော အကြိုက်ဆုံး lounge wear brand တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ Cov-19 ကာလအတွင်း quarantine fashion wear အဖြစ်အနောက်နိုင်ငံများတွင်ခေတ်စားနေကြောင်းဖေါ်ပြလိုက်ရပါသည်။
Tags: Brand, ecofriendly, Green, Pangaia, Styling, Sustainabale, Thi&FashionAlliance
Previous Miss Aniela; “Surreal Fashion” Photograph of Guo Pei collection